zawgyi in gtalk problem after IE9Beta - MYSTERY ZILLION
zawgyi in gtalk problem after IE9Beta
September 2010 edited September 2010 in Internet & Email
IE9Beta အသစ်ထွက်လို့ စမ်းသုံးကြည့်တာ စတင်တင်ချင်း windows update တစ်ခု hotfix3ခု လုပ်လိုက်ပြီး မှ IE9Beta ကို တင်တယ် genius တော့ ထိမသွားဘူး ဒါပေမယ့် gtalk message box မှာ zawgyi ရိုက်ရင် အတုံးတွေ့ပေါ်နေတယ်ဗျ။ ဒီအတိုင်း friend list မှာ မြန်မာလိုပေါ်တယ်။ စာရိုက်ရင် မြန်မာလိုရိုက်လို့ရတယ်။ message box ထဲရောက်မှ အတုံးတွေဖြစ်သွားတာ။ အစက အကောင်းကြီး IE9တင်ပြီးမှ ဖြစ်သွားတာ။ လုပ်ကြပါအုံးဗျို့
ps: windows7ကို သုံးထားတယ်ဗျ
IE က Firefox ထက်စာရင် Zawgyi Fonts တွေကိုသိပ်ပြီးတော့ Support မလုပ်နိုင်သေးဘူးဗျ။ Firefox မှာ ဇော်ဂျီကို အကုန်မြင်ရပေမယ့် . IE မှာတော့ ကိုယ်က ရိုက်ရင် လေးထောင့်တုံးတွေ.. မြင်နေတာက ဇော်ဂျီဖောင့်တွေဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ အခုထိ ပြင်လို့မရသေးပါဘူး.. UTF-8 ထားလည်း လေးထောင့်တုံးပဲဖြစ်နေအုံးမှာပါ... အနော်ကတော့ FireFox ကိုပဲအားပေးပါတယ်...
Sponsored by FIREFOX
farsiz ဆိုလိုတာက Gtalk မှာမရတာကို ပြောတာပါ။ IE မှာ မရတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။
@farsiz ... ကျွန်တော်လည်း win7 မှာ IE9 တင်လိုက်တာ farsiz ပြောသလို error ဖြစ်သွားတယ်။ Gtalk ရဲ့ message box မှာ မြန်မာလို မပေါ်တော့ဘူး။ ဖြေရှင်းနည်းကတော့ IE9 ရဲ့ Tools ထဲက Internet Option ထဲက General tab အောက်မှာ Appearance မှာ Fonts ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ zawgyi ကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါ။
နောက် win7 ရဲ့ fonts တွေကိုပါ ပြောင်းပေးချင်ရင် Personalize ထဲက Window color ထဲမှာ Advanced appearance Setting ထဲမှာ font ရှိသမျှကို zawgyi ပြန်ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။
ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်ဗျို့။ IE မှာ ဘာမှမဖြစ်တော့ အဲဒါကိုမလုပ်မီ ဘူး ကျေးဇူးထပ်တင်ပါတယ်ဗျို့
စာဖတ်တာ နည်းနည်းရှန်းတွားတယ်.. ... Gtlak မှာဆိုရင်တော့ Gtalk Settings ထဲက Change Fonts မှာ Zawgyi-One ကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ရင် ပြန်မြင်လာမှာပါ.